Auto AC Compressor Parts - Bowente Auto Parts Co., Ltd.
Waxaa jira qaybo muhiim ah oo auto ac compressor ah oo aan ku siin karno sidoo kale, sidaxajin birlab, valve xakamaynta, shaabadeynta usheeda dhexe, madax danbe, iyo wixii la mid ah.
Thexajin korontoqaboojiyaha baabuurku waa aalad gudbinta awoodda u dhaxaysa mishiinka baabuurta iyo kombarada qaboojiyaha baabuurta.Compressor-ka qaboojiyaha baabuurku waxa kaxeeya mishiinka baabuurku dhex maraayoxajin koronto.
Thexajin korontoqaboojiyaha baabuurku guud ahaan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: jilitaanka xajin, gariiradda clutch, iyo xuddunta xajinta.Anxajin korontoqaboojiyaha baabuurku waa wax soo saarka farsamada iyo korantada ee caadiga ah.
Waxaan inta badan wax ka qabannaaxajin korontoloo isticmaalo kombaresarada baabuurta ee qaboojiyaha.Taxanaha xajinta waxaa ka mid ah 5H, 7H, 10P, V5, CVC, DKS, FS10, MA, DLQT&SS, iwm.Si loo bixiyo adeegyo wanaagsan macaamiisha caalamiga ah, waxaan leenahay horumar & hababka wax soo saarka adag, adag & hababka maaraynta sayniska iyo sidoo kale xirfadlayaasha & hababka kormeerka tayada qumman.
Mabaadi'da Shaqada ee Xakamaynta Birlabka
Thexajin korontoqaboojiyaha gaariga waxaa gacanta ku haya qaboojiyaha, heerkulbeegga, qaboojiyaha, beddelka cadaadiska, iwm., si loo shido ama loo gooyo gudbinta awoodda u dhexeysa mishiinka iyo kombaresarada marka loo baahdo.Intaa waxaa dheer, marka kombaresarada baabuurka ay aad u badan tahay, waxay sidoo kale ciyaari kartaa door difaac ah.
Waxaa ka mid ah, gariiradda elektromagnetic-ga waxay ku xiran tahay daasadda kombaresarada auto ac, saxanka darawalku wuxuu ku xiran yahay shafka ugu weyn ee kombaresarada ac, iyo jiididu waxay ku rakiban tahay daboolka madaxa kombaresarka iyada oo loo marayo xajin oo si xor ah u wareegi karta.Marka qaboojiyaha la shido, hadda waxa uu dhex maraa gariiradda elektromagnetic-ka ee xabka elektromagneticiga ah, gariiradda elektromagnetic-kuna waxa ay dhalisaa soo jiidasho koronto, kaas oo isku dara saxanka waditaanka kombaresarka ac iyo jiidiyaha, una gudbiya wareegga matoorka shafka weyn ee kombaresarada si uu u rogo shafka weyn ee kombaresarada.Marka qaboojiyaha hawada la damiyo, xoogga nuugista ee gariiradda elektromagnetic-ga ayaa meesha ka baxaysa, saxanka wadista iyo jiididu waxa ay kala qaybsan yihiin tallaabada xaashida guga, kombasarruhuna shaqada wuu joogsadaa.
Jeexitaanka kombaresarada ayaa had iyo jeer wareegta marka matoorku shaqaynayo, laakiin kombaresariyuhu waxa uu shaqeeyaa oo kaliya marka uu jiiduhu ku hawlan yahay shafka waditaanka kombasarrada.
Marka nidaamkan la hawlgeliyo, hadda waxa uu ku qulquli doonaa gariiradda solenoid.Hadda waxa ay u soo jiidaysaa saxanka cududda.Xooga birlabeedka xooggan ayaa saxanka armatureka u jiida dhinaca isteerinka.Tani waxay quful doontaa jiidi iyo
Taarikada cududuhu waa wada;taarikada cududuhu waxay wadaan kombaresarada.
Marka nadaamka la demiyo oo hadda joogsado in uu dhex maro gariiradda solenoid-ka, isha caleentu waxa ay ka soo jiidataa saxanka armature ka jiidka.
Gariiradda birlabku ma wareego sababtoo ah magnetism-keeda waxa lagu wareejiyaa cududda iyada oo loo marayo jiidka.Saxanka armature iyo golaha xuddunta waxay ku go'an yihiin shafka wadista kombaresarada.Marka kombaresarada aan la kaxeynin, mashiinka xajintu wuxuu ku wareegayaa xajiyeyaasha kubbadda laba-saafka ah.
Dayactirka cilladdaXajin Magnet
Markaxajin korantada oo qaboojiyahagariiradda ayaa gubtay, marka laga soo tago dhibaatooyinka tayada leh, sababta ugu weyn ayaa ah cadaadiska nidaamka qaboojinta baabuurka oo aad u sarreeya, iyo iska caabbinta kombaresarada ku shaqeysa oo aad u weyn.Awooda nuugista korantada ee gariiradda elektromagnetic-ga ayaa ka badan xoogga nuugista korantada ee gariiradda korantada, waxaana lagu gubay kulayl xad dhaaf ah.
Waxaa jira 3 sababood oo cadaadiska sare leh ee nidaamka qaboojinta auto:
1. Matoorku waxa uu ku socdaa xawaare aan fiicneyn marka la dhigto baarkinka iyo qaboojiyaha hawada lagu isticmaalo qorraxda hoosteeda muddo dheer;
2. Marka marawaxada qaboojinta ee haanta biyuhu ay fashilanto, qaboojiyaha ayaa wali la isticmaalayaa wakhti dheer iyo xoog badan ( marawaxada qaboojinta ee haanta biyaha waxaa lala wadaagaa marawaxada qaboojiyaha);
3. Qadarka gaasta qaboojiyaha ee lagu daray nidaamka qaboojiyaha ayaa xad dhaaf ah.
Marka auto ac compressor uu bilaabo inuu shaqeeyo, fiiro gaar ah u yeelo daaqada fiirsashada ee haanta kaydinta dareeraha oo ogow in aysan jirin xumbo hawo ah daaqada indho-indheynta.Kadibna ku xidh mitirka cadaadiska sare iyo kan hoose ee nidaamka qaboojiyaha, hubi cadaadiskiisa, oo ogow in labada dhinac ee cadaadiska sare iyo cadaadiska hooseeya ay leexdaan.Sida cad, qaboojiyaha si xad dhaaf ah ayaa loo buuxiyey.Ka dib marka qadarka saxda ah ee qaboojiyaha laga saaro dhinaca hoose ee cadaadiska hooseeya (cadaadiska dhinaca cadaadiska sare waa 1.2-1.8MPa, cadaadiska dhinaca cadaadiska hooseeya waa 0.15-0.30MPa), cilladda waa la tirtiraa.
Si looga fogaado fashiladaas, qaboojiyaha baabuurku waa in aan loo isticmaalin 3 xaaladood ee soo socda.
1. Marka qadarka qaboojiyaha lagu daray uu ka bato nidaamka, waa in lagu sii daayaa wakhtiga, haddii kale, qaboojiyaha lama ogola in la isticmaalo.Habka lagu hubinayo qaddarka qaboojiyaha waa: marka baabuurka ac kombaresarka uu bilaabo inuu shaqeeyo, hubi inay jiraan xumbo ku jira daaqadda fiirsashada ee haanta kaydinta dareeraha ah.In ka yar, qaboojiyaha waa in lagu daraa qaddar ku habboon.
2. Marka marawaxada qaboojinta ee haanta biyuhu ay fashilanto oo ay istaagto socodsiinta hawada waa in isla markiiba la joojiyaa, hadii kale, nidaamka qaboojiyadu waxa ay dhalinaysaa cadaadis aad u sareeya, kaas oo sababi doona in xajin elektromagnetic-ga ah ay simbiriirixdo oo gubato.
3. Marka baabuurta la dhigto, marka matoorku uu shaqaynayo, waxa fiican inaadan shidin qaboojiyaha.
Sida loo dayactiroxajin birlab:
Thexajin birlabwuxuu hawlgeliyaa oo ka saarayaa kombaresarada marka qaboojiyaha gaarigaagu damo ama damo.Marka korantada ka imanaysa daarta/damisa ay koronto u soo dirto gariiradda birlabeedka, waxay keentaa in xajinta bannaanka ay u soo jiido kombaresarada, xidhid jiidka iyo hawlgelinta kombaresarada.Sababtoo ah ac clutch waxay ku xiran tahay shafka kombaresarka, haddii ay noqoto mid go'an, ma dhaqaaqi doonto baabuurka ac kombaresarada.Dhowr tillaabo ayaa kaa caawin doona inaad xaliso dhibaatadan.
Ka saar suunka qalabka qaboojiyaha ee baabuurka oo leh furaha cabbirka saxda ah ee ku jira furahaaga.Ka saar xiriiriyaha kombaresarada gariiradda magnetic.Isticmaal godka cabbirka saxda ah si aad uga saarto bolka 6mm ee ku yaala bartamaha xajinta AC.
Ka soo jiid xajinta, oo u fiirso meelaha bannaan ee usheeda ka dambeeya.Waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro xajinta si habboon, markaa ku hay meel ammaan ah si aad uga fogaato inay lumin.Ka saar giraanta snap-ga ee ku taal shafka ilaalinaya jiidista, kana siib kan usheeda dhexe.
Si fiican u nadiifi usheeda dhexe iyo qaybaha kale ka hor inta aan la rakibin.Geli jilitaanka cusub, oo geli giraanta jeexan oo geesta rogman oo dibadda u sii jeedda.
Ku rakib hal bareeriye duleelka kombaresarka, dabadeed ku dheji xajinta, oo si ammaan ah ugu xidh bolka 6 mm.
Dhig cabbirka dareemaha inta u dhaxaysa xajinta iyo jiidka si loo hubiyo nadiifinta saxda ah.Haddii nadiifintu aysan sax ahayn, ka saar saxanka xajinta oo ku dar meel bannaan oo kale.
Hubi farqiga hawada si aad u hubiso in xajintu si sax ah u shaqayn doonto.Haddii farqiga hawadu iyo/ama nadiifintu aanay sax ahayn, xajintaada waxa laga yaabaa inay si dhakhso ah u daataan.Ku xidh xidhiyaha gariiradda elektromagnetic-ga
Tayada ugu sareysavalve xakamayntawaa badeeco cusub oo u dhigma OEM & suuqa iibka kadib, agabkeedana waxaa la siiyaa shirkadaha militariga.Alaabta waxaa halabuuray oo ay sameeyeen kooxdayada R&D ee madax banaan.Nidaamku wuxuu qaadanayaa sawirka xakamaynta SPC & nidaamka "shan kormeer" ee maaraynta & xakamaynta tayada.Shuruudda aqbalku waa "eber cillado".Kooxdayada R & D waxay leeyihiin waayo-aragnimo qani ah si firfircoon u horumarinaysa & wax cusub u cusub waqti ka waqti.Alaabtu waxay ku guulaysatay dhowr shati halabuurnimo heer dawladeed waxayna dhaaftay aqoonsiga TUV ee Jarmalka.Sababtoo ah noocyo dhammaystiran, tayada xasilloon, alaabooyin ku filan & qiimayaal la awoodi karo, waxay buuxin kartaa dalabaadka badan ee macaamiisha.
Nidaamyo qaboojiyeyaal badan oo cusub iyo badi baabuurta cusub ee raaxada ayaa isticmaala kombaresarada aan xajin lahayn ee lagu rakibaykombaresarada kontaroolada.Compressors-less-less waxay isticmaalaan kulayliyeyaasha, dareemayaasha, iyo solenoids si ay si elektaroonik ah u qabtaan hawlo la mid ah sida xajinta korantada si farsamaysan.
Shaqada tuubbadu waa in la isku dheellitiro cadaadiska dareeraha ku qulqulaya nidaamka iyada oo la xakameynayo xagasha saxanka.Tani waxay ku ilaalinaysaa uumiga heerkul joogto ah oo waxoogaa ka sarreeya barta qaboojinta si loo kordhiyo xawaaraha hawlgalka ee nidaamka qaboojinta baabuurka.
Inkastoomashiinnada gacanta ku hayntawali waxay ku shaqeeyaan baabuurta da'da weyn iyo kuwa dhaqaale badan sababtoo ah kharashka dheeraadka ah, kala duwanaanta xakamayntakontoroolka elektarooniga ahayaa aad uga sarreeya.Walalka kantaroolka elektaroonigga ah ayaa aad waxtar u leh oo yareynaya barokaca, wuxuu yareeyaa xirashada nidaamka AC, wuxuu yareeyaa culeyska matoorka inta lagu jiro shaqada, wuxuuna soo saaraa qiiqa nadiifka ah.Ugu dambeyntii, moodooyinka qaaliga ah ayaa aad waxtar u leh inta lagu jiro wareegga nolosha ama gaadiidka.
Tan iyo markiikombaresarada kontoroolkawaa elektaroonig, baaritaanka ogaanshaha wuxuu u baahan yahay kaliya in lagu xiro qalabka baaritaanka ogaanshaha.Dhowr daqiiqo gudahood, waxaad go'aamin kartaa in qaybahaaga qaboojiyahaagu ay si habboon u shaqaynayaan.
Waalka kantaroolka makaanikada
Baahida qaboojinta sare
Inta lagu jiro xilliyada dhexdhexaadka iyo baahida sare ee A/C, cadaadiska nuugista nidaamka ayaa ka weynaan doona barta la dhigay waalka kantaroolka.Inta lagu jiro xilliyadan, thevalve xakamayntawaxa uu ilaaliyaa hawo dhiigbaxa oo ka soo qaada kiishka ilaa dekedda nuugida.Sidaa darteed, cadaadiska kiishku wuxuu la mid yahay cadaadiska nuugista.Xagasha saxanka wobble, sidaas darteed barokaca kombaresarada ayaa ah ugu badnaan.
Dalabka qaboojinta hooseeya
Inta lagu jiro xilliyada baahida A/C ee hoose iyo dhexe, cadaadiska nuugista nidaamka wuxuu hoos ugu dhacayaa barta la dhigay waalka kantaroolka.Qalabka koontaroolku wuxuu ilaaliyaa qiiqa ka soo baxa qiiqa ilaa kiishka wuxuuna ka ilaaliyaa qiiqa ka soo baxa sanduuqa ilaa qaadashada.Xagasha saxanka wobble iyo sidaas darteed barokaca kombareeyaha waa la dhimay ama la yareeyaa.Mudooyinkan, barokacadu si tartiib tartiib ah ayey u kala duwan tahay inta u dhaxaysa 5% iyo 100% barokaca ugu badan.
(Kaliya lagu dabaqi karo kombaresarada barokaca ee doorsooma)
1. Waalka waxaa xannibay wasakh ( uumi-bixiyuhu way fududahay in la qaboojiyo)
2. Meel aan habboonayn ee guga hagaajinaysa waalka
1. Ka soo kabso qaboojiyaha nidaamka qaboojinta.
2. Beddel waalka nidaaminaya barokaca ee ku yaal daboolka dambe ee kombarada.
3. U daa in bamka faakuumku uu socdo ugu yaraan 15 daqiiqo si uu uga saaro gaaska iyo qoyaanka aan la qaadi karin ee habka qaboojiyaha.
4. Ku soo celi inta lagu taliyey ee talaajadeeyaha iyo saliidda laga helay qaboojiyaha nidaamka.